बर्दिबासमा शक्तिशाली बम बिस्फोट • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
बर्दिबासमा शक्तिशाली बम बिस्फोट
रितिक अधिकारी, सर्लाही । स्थानीय तहको तेस्रो चरण निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन महोत्तरीको बर्दिबासमा बम विस्फोट भएको छ । बर्दिबास नगरपालिकाको कम्पाउन्डबाहिर वालुवा राखिएको ठाउँमा बम विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिए ।
टिफिन बक्सभित्र विस्फोटक पदार्थ राखेर पड्काइएको बमबाट जनधनका क्षति नभएको उनले बताए । बेलुकी ८ बजरेर १० मिनेटमा बम विस्फोट भएको थियो । नेपाली सेनाको फस्ट राइफल गणका मेजर भरत विष्टले थोरै विस्फोटक मात्र विस्फोट भएकाले कुनै क्षति नभएको बताए ।
घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो । अरु बम पनि हुन सक्ने आशंकामा सर्च गरिए पनि थप विस्फोटक पदार्थ नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोटको घटनापछि पश्चात बर्दिवासलगायतका स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको प्रहरीले जनायको छ ।